एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : अयोग्य कर्मचारी राखेपछि ‘यस्तै त होनी ब्रो !’ — Motivatenews.Com
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : अयोग्य कर्मचारी राखेपछि ‘यस्तै त होनी ब्रो !’
काठमाडौँ – नेपालमा संचालित पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये १ हो, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले व्यापारमा अपार सफलता पाइरहदा पुरानो बीमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स भने झन झन खुम्चिदै गएको छ । यसरी व्यापार खुम्चिनुका विभिन्न कारणहरु छन । त्यसमध्येको एउटा कारण हो कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल ।
आफ्नो गोजीका मान्छेलाई ट्याप्प टिपेर सुटुक्क नियुक्ति गर्दाको परिणाम कम्पनीले भर्खरै निश्काशन गरेको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण निस्काशन गर्दा प्रतिसेयर आम्दानी गलत देखाएपछि कम्पनीका चिफ फाइनान्स अफिसर लगायतका कर्मचारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशित विवरणमा कम्पनीले कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ८७ पैसा देखाएको थियो । जुन पछि आएर झुट सावित भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड रहेकोमा कम्पनीको प्रकाशित खुद मुनाफा १३ करोड ७ लाख रहेको तथ्यलाई आधार मानेर गणना गर्दा कम्पनीको ९ महिनाको प्रतिशेयर आम्दानी जम्मा ६ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ भने वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्र हुन्छ । तर कम्पनीले हुँदै नभएको प्रति सेयर आम्दानी देखाएर जनता झुक्याउने प्रयास गरेको थियो ।
एसियन लाइफ इन्सुरेन्सका चतुर सेयरधनीहरुले कम्पनीले झुक्याएको थाहा पाएपछि सीएफओको नाक काटिएको छ । सेयरधनीले हिसाब मिलेन भन्दै कम्पनीको व्यापक विरोध गरेपछि बाध्य भएर कम्पनीले आफ्नो गल्ती सच्याएको छ । आफ्नो असक्षमतामाथि लाचारी प्रकट गर्दै लाजै पचाएर कम्पनी भुलसुधार गरेर माफी मागेको छ ।
२०७७ असार ११ गते प्रकाशित
फिचर न्युज सम्बन्धित
नबिल बैंकको दशैं उपहार, खुशीको बहार (भिडियोसहित)
समाजसेवामा रमाउने कुँवरले फेरि गरे राहत बितरण
ह्याक भयो इसेवा ? छिटो पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस्, नत्र ?
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई खुशीको खवर, अब खल्तीमा सिधै रकम लोड गर्न सकिने
भालुवाङ बजार : जो कहिल्यौ आफ्नो बनेन तर राजधानी बन्यो
एनआइसी एशिया बैंकको लाभांश प्रस्ताव, कति छ बोनस ?
७ जना तस्करले प्रहरीका असई गोविन्द विकको घेराहाली हत्या गरेको खुलासा, यी हुन हत्यारा
थप ३७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौंमा कति ?
कांग्रेसका सबै सा‌ंसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने
होटल मालिकसहित ७ जोडी रङ्गेहात पक्राउ, पक्राउ पर्नेको विवरणसहित